SAWIRO+ MUUQAAL:-Saraakiil ka tirsan ciidanka Kumandooska oo la dalacsiiyay iyo dhuulatus ay sameeyeen. – Radio Muqdisho
SAWIRO+ MUUQAAL:-Saraakiil ka tirsan ciidanka Kumandooska oo la dalacsiiyay iyo dhuulatus ay sameeyeen.
Ciidamada kumaandooska ee Danab ayaa maanta munaasabad lagu dalacsiinayay qaarka mid ah saraakiishooda lagu qabtay xarunta tababarka ciidamada ee Jaziira, halkaasi oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay horey u barteen ee xagga ciidanka ah, waxaana munaasabadda ka qeyb galay Taliyaha ciidanka Xoogga dalak Soomaaliyeed sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho qarshe” iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa markii ay dhameysteen qaar ka mid ah ciidankaasi dhoola tuska Milatari kaddib uu khudbad ugu jeediyay hoolka shirarka ee xerada tababarka Jaziira, isagoo ugu horeyn ugu hambalyeeyay sida tababarka ay ugu faa’ideysteen islamarkaana ay u soo bandhigeen.
Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho qarshe” Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadal ka jeediyay xafladda ayaa kula dar daarmay ciidamada in waxyaabaha ay barteen ugu adeegaan shacabka oo ay ka difaacaan cadowga, isla markaana ay xoojiyaan muhiimada ay leedahay dhaqan galinta sharciga askariga looga baahanyahay, ayna ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici karta sharafta Ciidanka.
Sareeyo Guuto Daahir Aadan Cilmi “Indho qarshe” ayaa dalacsiiyay qaar ka mid ah askartaasi oo uu ka dhigay Alilfle iyo laba alifle, kuwaa oo markii hore ahaa dablayaal, waxaana dalacsiin kaddib lagu dhaariyay Taliyaha hortiisa ciidankaasi.
Ugu dambeyntii Taliska ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka, iyadoo gudaha dalka iyo dibadiisa ay ku qaataan tababaro kale duwan oo qaarkood ay yihiin xirfad kororsiin, waxaana taasi ay suura galisay in ciidamada ay door muuqata ay ka qaataan xoreynta dalka, iyadoo sanadkii tagay ee 2014-ka lagu xusuusto fulinta howlgaladii galeyr iyo badweynta hindiya oo ay hantiyeen ciidamada deegaanno iyo degmooyin badan ka tirsan dalka taasi oo ay mahdiyeen Bulshada Soomaaliyeed.
Ciyaaryahan Suso oo Ku Biiray Kooxda AC Milan